ရေခဲပြင် Tray ထဲမှာရေခဲနေသော Appetizer ဆာဗာနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Chilling Appetizer ဆာဗာ
ရေခဲပြင် Tray ထဲမှာအတူ Chilling Appetizer ဆာဗာ: ရေခဲနေသော condiments, အသီးအနှံ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, နာရီ Delicious လတ်ဆတ်အေးမြသော appetizers စောင့်ရှောက်ဖို့ ice.easy လမ်းအပေါ် chilled အစားအစာကိုစောင့်ရှောက်ရန်6ကဏ္ဍများနှင့်အတူ Tray ထဲကကွန်တိန်နာအမှုဆောင်ခြင်း။
သင့်ရဲ့ပါတီသို့မဟုတ်ပျော်ပွဲစားတစ်လျှောက်လုံးလတ်ဆတ်အေးမြသော, သင့်သုပ်, အသား, ငါး, အသီးအနှံ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, dips ထားပါ။ ရုံရေခဲ Cube သို့မဟုတ်ကြေမွရေခဲနှင့်အတူဗန်း၏အောက်ဆုံးဖြည့်ပါနှင့်အထက် condiments ဗူးခွံထားပါ။ အဆိုပါအဖုံးဖုံးတော့ဘူးများအတွက် contents တွေကိုအေးနှင့်ပိုလတ်ဆတ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မလိုချင်တဲ့ bug တွေသို့မဟုတ်ဖုန်ထွက်တတ်၏။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးစင်တာသို့ကျဆင်းလာဖလား, အဖုံးနှင့်တကွကြွလာနှင့်ဆုံလည်အခြေစိုက်စခန်းပါရှိပါတယ်။
တစ်ပါတီတစ်လျှောက်လုံးကြည်လင်ပြတ်သားစွာနဲ့အအေးသင့်ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထားပါ။ သင့်ရဲ့အအေး appetizers နှင့်သစ်သီးအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်သငျသညျဖျော်ဖြေနေစဉ်! ဒီ 4pc appetizer ဆာဗာ၏အောက်ဆုံးဗန်းနာရီလတ်ဆတ်ပြီးခြောက်သွေ့, အအေးပစ္စည်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရေခဲတစ်အလွှာရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ထိပ်တန်းအခန်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, dips, ဆဲလ်ဆာ, အသီးများနှင့်အခြားအအေး appetizers ကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ စင်ကြယ်သောဒီဇိုင်းမဆိုပုံစံမျိုးအတွက်ကိုက်ညီ။ Clear ကိုပလပ်စတစ်ပစ္စည်း shatterproof ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပပါတီများအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ ဂရိတ်တစ် BBQ မှာရှိသည်!4ဗူးခွံသီးခြားစီချစ်ပ်, ပေါက်ပေါက်, ဆင်တူတဲ့ဒိန်ခဲ, စတာတွေအပါအဝင်ပါတီအစားအစာများကိုအမျိုးမျိုးအဘို့လည်းသုံးနိုင်တယ်
Chilling Appetizer ဆာဗာ
တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုင်းအစ (set ကို) / polybag, အရောင်သေတ္တာသို့မဟုတ်အတွင်းစိတ်သေတ္တာများနှင့်ပို့ကုန်စက္ဏူထူ - စံပုံမှန်။
အဆိုပါ Chilling Appetizer ဆာဗာ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်ကြားရေး:
1.Four ဖြုတ် Tray (6 အပိုင်း)
လေးဖြုတ် Tray (6 ကဏ္ဍများ):
နှစ်ခု compartments.You သို့လေးဖြုတ်ဗူးခွံတစ်ခုစီကိုအုပ်စုခွဲထဲသို့အစားအစာမျိုးကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
အသီး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, အအေးဖြတ်တောက်မှု, မြိန်ရေရှက်ရေ, ပင်လယ်စာနှင့်ပင်ဆူရှီအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။
နွေရာသီကာလအတွင်းအိမ်ပြင်ကို အသုံးပြု. လျှင်ပျံအင်းဆက်ပိုးမွှားထွက်စောင့်ရှောက်မည်သည့်အဖုံး။
ဤသည်အစားအစာအေးဗန်းမဆိုအခါသမယများအတွက်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးမွေးနေ့အခမ်းအနားတစ်ခုနှစ်ပတ်လည်ညစာစားပွဲတစ်ခုကျောင်းဆင်းပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများစုစည်းစီစဉ်လျက်ရှိသည်ဖြစ်စေ, ဤကောင်းတဲ့အလှဆင်ခြင်းနှင့်အလွန်အသုံးချည်ငင်အစားအသောက်လင်ပန်းသင့်စားပွဲတစ်ခုမဖြစ်မနေထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဤ Chilling Appetizer ဆာဗာအကြောင်းပိုမိုဂရုစိုက်စေခြင်းငှါ
ရေခဲပေါ်မှာဤအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဗန်း, ဂရုတစိုက်သင်၏အသက်တာပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးပါပြီ! ယခု မှစ. , သင့် appetizers, အချိုပွဲ, ဒိန်ခဲ, အသီး, condiments ရှည်လျားများအတွက်ဿုံမျြးစိမျ့စိမျ့နဲ့မနှိုငျးယှအရသာရှိနေဆဲမည်! သင့်ရဲ့အသီးအပွ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, Pickled, kraut, ketchup, မုန်ညင်း, ငါးနှင့်ချစ်ပ်များနှင့် pretzels, appetizers အတူကကိုသုံးပါ, ဒိန်ခဲ , condiments, ချောကလက်ရယူထားသော, အချိုပွဲများနှင့်ကြင်မျြးစိမျ့စိမျ့ဆက်လက်တည်ရှိရန်လိုအပ်သည်တစုံတခုကိုမျှ။
ပထမဦးစွာပြုလုပ်ပြီးတော့ before.And လျှော်သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးကိုင်ဆောင်ထားသူအတွက်နေရာအရပ်အအေးရေခဲနှင့်ပေါ်တွင်အခန်းနေရာ! သင်သည်သင်၏ appetizers, အချိုပွဲ, ဒိန်ခဲ, အသီး, condiments နှငျ့သငျအေးသောအပူချိန်တွင်စားနပ်ရိက္ခာ fresh.Preserving စောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိဘာမှမပြုမီပိုမိုလွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှထားနိုငျသညျ! အသုံးပြုပြီးနောက်ကိုလျှော်ပေးပါ။
အလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်တော်တော်လေး appetizer server ကို
ဒါကချောမော appetizer ဗန်းနှင့်ဖန်တစ်ဦးအဖြစ်မိုးသည်းထန်စွာအလွန်ကြံ့ခိုင်ပေမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါအဖုံးကိုချစ်နှင့် Indoor နှင့်ပြင်ပနှစ်ခုလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါအဲဒါကို juicing မှတပါးစားပွဲပေါ်တစ်ဦးစင်တာအပိုင်းအစအလှဆင်အဖြစ် wheatgrass နှင့်အတူကောငျးမှကြည့်ရှုမည်ထင်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ဝယ်ယူနှင့်အတူဝမ်းသာတယ်နှင့်ဒီထုတ်ကုန်အကြံပြုလိမ့်မယ်။
ဝိုး။ ဤသည်ဒါကြံ့ခိုင်ဖြစ်ပါသည်, ပေါင်းတစ်ဦးချင်းစီကဏ္ဍများကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် lids ရှိသည်။ ဒါဟာဝေးနေဖြင့်အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံး appetizer server တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ရေခဲပေါ်မှာအအေးခံအရာခပ်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်ဂရိတ်အရွယ်အစား, မင်္ဂလာကိုလူတိုင်းစောင့်ရှောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့မုကိုင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ အရမ်းကောင်းတယ်